राम्रो म स्तर माथि लम्पसार छन् मित्र को थुप्रोअगाडि न्याय 29 मार्कर म न्याय कल र यसको एक मुश्किल भन्न लागिरहेको छु. केिकलयिरग एक उद्देश्य संग 99% यस ब्लक र कमाई को 16 000 किन यो त धेरै को लागि केही लम्बाइ एक पिट स्टप भएको छ अंक म flashbacks भइरहेको र उहाँ सम्झनुहुन्छ छु.
आफ्नो हार्ड छैन, यसको frustratingly कठिन!
तर म यो त सक्नुहुन्छ तपाईं सक्नुहुन्न भने, अगाडि सोचाइ यसको केवल एक कुरा र हाम्रो कार्यहरूको परिणाम सोचिरहनुभएको (आहा म मेरो 10 औं ग्रेड शिक्षक जस्तै आवाज!)
यस ब्लक गर्न बायाँ तल मा बम रही आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो.
धेरै बाँकी सबै फट सबै बेलुन को पहिलो सम्म बम तार cages हिट, त्यसपछि यसलाई झटका! यो तपाईंले केही HEADWAY दिनेछु. सम्म तपाईं लक अप चट्टानको गर्न प्रमुख कम साथ आफ्नो बाटो काम, एक पटक प्रमुख निःशुल्क छ र तिनीहरूलाई जारी. प्रयास र आफ्नो बाँकी बेलुन सुरक्षित, तिनीहरूले सजिला चाँडै मा आउनेछ. तपाईंले ईथर मा बन्द चट्टानहरु को पङ्क्ति र तिनीहरूले आत्मा अनलक तपाईँ बेलुन popping सुरु गर्न सक्छन्. तपाईं एक बेलुन bursting एक समयमा केही cages अनलक गर्न सक्ने देख्नु, तर केवल गरेर उड्ने आसन्न ब्लक, तपाईं यसलाई अर्को cages भित्र ब्लक तर व्यक्तिहरूलाई bursting छैन! तल देखि cages खुला तोड्न स्क्रिन पर्याप्त सुरु ड्रप गरेपछि पनि मुर्ख जाने छैन, सकेसम्म धेरै बेलुन रूपमा संरक्षण…तिनीहरूले सधैं सजिला मा आउन जस्तो, तर तल सार्दा कि स्क्रिन राख्न.
कुञ्जीहरू इँटा अनलक
यो एक स्तर कहाँ आफ्नो चाल त यो मारा सीमित छन् छैन, तर आफ्नो firecrackers बारेमा भूल Dont, तिनीहरूलाई बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग र तपाईं पहिलो बन्द सेट गरिएको थियो नभएसम्म अर्को कमाउन सुरु गर्न सक्दैन भनेर सम्झना. तपाईं बोर्ड र सारा सेट अप ठूलो संयोजन को एक छ भने अगाडी शायद बस यसलाई बन्द सेट र थप एक सानो खाली. सम्झना स्क्रिन भने चाल र ब्लक वा बेलुन यसलाई समातेर छन् ड्रप डाउन अभ्यस्त.
तल मा एक बम भइरहेको धेरै सजिला हुन सक्छ!
त्यहाँ तल थप कुञ्जीहरू छन् र firecrackers तिनीहरूलाई खाली लागि पूर्ण छन्. तपाईं जाने रूपमा मनमा आफ्नो उद्देश्य राख्न, Dont को पाल्तु जनावर जहाँ स्क्रिनको एक licorice संग रंगीन ब्लक को सबै किसिमका झोला माथि बायाँ तल र सोच 'मा आफूलाई फेला?’ आफ्नो उद्देश्य खाली छ 99% यस ब्लक को ….डोह! यो मात्र हुन सक्छ अर्थ 1 बायाँ! रंग सँगै राख्न लक्ष्य र तल को लागि एक बम बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने म यस ह्यान्डी मा आउनेछ आश्वासन, अनिवार्य तपाईं दुई ब्लक संग समाप्त हुनेछ…हाँ, म निराशा उल्लेख गर्नुभयो?